Izay mba Hihaona Vehivavy Tena Te Daty»ny fahamarinan-toerana Fifanarahana
Ny olana: tsy mahalala izay mba hihaona vehivavy tena te daty, ianao koa dia mifarana any amin’ny toerana tsy izy rehetra. Ny vahaolana: mahatakatra ny zavatra tsara fanahy ny vehivavy te-hihaona, ary mandeha any amin’ny toerana izay dia mandehandeha. Dia izany fomba izany koa tsotra? Tsy mazava loatra. Tohizo ny famakiana ary izahay mazava ny zava-drehetra ny ho anareo, isika rehefa manazava ny toerana tsara indrindra mba hihaona ny vehivavy tokan-tena ho an’ny fohy sy ny fifandraisana maharitra. Amin’ny lafiny fanamarihana, raha toa ka miady amin’ny manatona sy ny fivoriana ny vehivavy noho ny tsy menatra, ny fanahiana ara-tsosialy, na ny tahotra ny fandavana, ho azo antoka ny maka»Ahoana no saro-kenatra sy ny Fanahiana ara-Tsosialy».
Mifidy fotsiny ny Safidy efatra eto amin’ity pejy ity. Ny olon-drehetra ao amin’ny tontolo niaraka ho iray amin’ireo antony roa: ny mahita mpiara-miasa ny manana ny maharitra sy ny fifandraisana matotra miaraka na ny mahita olona iray ho hook-up, ary na fohy ny fifandraisana, na ny fling. Fikarohana vao haingana navoaka tao amin’ny Amerikana eo amin’ny fiaraha-monina Review-kevitra ny karazana fifandraisana izay tianao no mibaiko izay tokony handeha hitsena ny vehivavy. Noho izany, ny mba voalohany ny raharaham-barotra dia ny vao hahalala izay karazana fifandraisana tianao, ary avy eo dia tetika ara-tsosialy ny lalana manodidina izany safidy izany. Raha tadiavinao ny vehivavy izay afaka ny ho lasa ny sipa, jereo ity lahatsary ity ny famelabelarana ny telo dingana tsy MAINTSY atao mba hahatonga izany ho tanteraka. Ny Amerikana eo amin’ny fiaraha-monina Review manambara fa ny fivoriana ny vehivavy nandritra ny isan’andro dia mampitombo ny mety tsy mahita olona toy izany koa ny tombontsoa ho anao. Amin’ny fivoriana vehivavy ao an-toerana ireo, dia ihany koa ny mamorona fifandraisana lalina noho ny nizara ny zavatra mahaliana. Tokony ho tsara vintana ampy mba hiafara amin’ny olona avy amin’ny iray amin’ireo toerana ireo, fikarohana dia mampiseho izany fifandraisana izany dia mirona ho sambatra kokoa, bebe kokoa mahafa-po, ary amin’ny ankapobeny dia lava kokoa noho ny eo ho eo ny fifandraisana. Raha toa ka ny fivoriana ny vehivavy dia tsy olana, fa ny fahazoana azy ireo hoe»eny»ho anao, mampiasa ireo sivy teny ny voalohany telo minitra mba hisarihana ny ankizivavy tianao, na aiza na aiza, sy amin’ny fotoana rehetra. Amin’ny fandrahoan-tsakafo, ny sary, ny fandraisana ny fampianarana tsy mampivelatra ny fahaiza-manao ary mahatonga anao ho mahaliana kokoa, izany ihany koa ny praiminisitra fahafahana mba hihaona ny vehivavy. Maka mpianatra avy hatrany dia mamporisika ny commonality amin’ny mpiara-mpianatra. Commonalities hanome anareo ny fotoana mba hihaonana amin’ny vehivavy mamely ny resaka momba ny zavatra mifandray amin’ny kilasy ary avy eo dia mitohy ny resaka ny kafe na ny sakafo hariva. Ataovy azo antoka tsy handray ny fampianarana ianao tena liana amin’ny. Izany azo antoka dia afaka manao sy ny kalitao foana ny resaka manodidina ny lohahevitra izay mampifandray anao. Ny fotoana manaraka anao hitsidika ny toerana tena fivarotam-boky, dia hitandrina ny maso ho an’ny vehivavy tsara tarehy perusing ny toerana tena talantalana. Toy ny kilasy, ny fivoriana ny vehivavy izay manohana ny tiany ny fizarana ao amin’ny fivarotam-boky ihany koa ny mampitombo ny mety manana zavatra iraisana amin’ireo vehivavy. Ny zavatra tsara indrindra momba ny fivarotam-boky izany andro izany dia ry zareo matetika dia tafiditra amin’ny fisotroana kafe na ny mozika fizarana. Rehefa tonga any tsara ny resaka nifanaovany tamin’ny vehivavy manerana ny boky tianao, dia afaka ho azy mamory ny resaka,»Miandry, mbola tsy naheno Mozika X.»avy eo Dia, hitarika azy ho amin’ny mozika fizarana. Na dia afaka milaza ianao tsy vonona ny atsaharo ny miresaka miaraka aminy ary nanontany azy raha toa izy ka te-haka ny hisotro na hihinana haingana hihinana any amin’ny fivarotam-boky, trano fisotroana kafe. Raha ny ampahany amin’ny ekipa milalao na fotsiny tsy misy ny fifaliana eo amin’ny toerana tena ny ekipa, ny fanatanjahan-tena ny zava-nitranga dia lehibe amin’ny toerana mba hitsena ny vehivavy izay manana be dia be iraisana. Raha toa ianao tsy mba hijery ny lalao, ento ny namana sy ny hipetraka eo amin’ny mpivady ny vehivavy ianao tia te hihaona. Anontanio ny Olona kevitra mangataka ireo vehivavy noho ny heviny momba ny»adi-hevitra»ianao rehefa miaraka amin’ny namanao momba ny lalao, ny mpilalao, na ny mifanohitra amin’ny ekipa amin’ny faran’ny vanim-potoana. Izy ireo dia soso-kevitra ara ekipa raha manao izany ianao dia jereo tsara kokoa eo imason ny vehivavy tsy mitady, fa io tetika matetika tsy ilaina, ary tsy mety tsara kokoa ny mijanona tanteraka marina ny tenanao. Fatorana, noho ny fitiavana ny lalao, ary ianao manana fifandraisana ho an’ny fiainana. Raha toa ianao tsy mba play ny lalao amin’ny fiaraha-monina, mpiara-ed ekipa, sociologists milaza ny mety manakaiky ny vehivavy iray liana ianao mitombo satria ny zavatra iray antsoina hoe»toe-javatra generalization.»Araka izany foto-pisainana, ny olona, rehefa miasa mankany amin’ny tanjona iraisana, dia azo inoana fa hitombo kokoa. Ny tenin fampitandremana: ity dia tsy ny sekoly ambony varsity. Ankoatra ny maha-mpanao fanatanjahan-tena tsara, izay zava-dehibe kokoa no ho ny tsara fanatanjahan-tena. Sarotra ny fahazoan-dalana hiditra ny famelana ny vehivavy miezaka ianao ny volana mahita anao ho toy ny mahafinaritra lehilahy izay tiany fotsiny mba hanana fotoana tsara.
Very hahafinaritra sy handresy-katsaram-panahy
Rehefa tapitra ny andro, ny zava-dehibe dia ny isa ao an-telefaonina ary tsy ny anankiray teo amin’ny scoreboard. Ny farany toerana ny vehivavy angamba mihevitra ny fihaonana mahaliana ny bandy dia ny legioma lalantsara. Na izany aza, io singa mahagaga raha ny marina dia afaka miasa ho anao, raha novonoina tsara. Rehefa mahita vehivavy iray liana ianao, dia anontanio ny fanontaniana momba ny sakafo zavatra eo amin’ny lalantsara. Ohatra, raha toa ka ianao ao amin’ny paty lalantsara, haka ny saosy na ny karazana paty ary nanontany azy raha toa ka manana soso-kevitra mikasika ny fomba mahandro azy. Anontanio azy raha izy no nanandrana izany ary raha toa ka na inona na inona tsara. Raha toa ka ianao ao amin’ny fizarana hena, manontany azy ny momba ny manapaka ny hen’omby dia ny fahazoana sy ny fomba izy handeha ny mahandro azy. Ny manan-danja eto dia mba feo tena liana sy te hahalala raha tsy avy eny amin’ny maha-mandady izay cruising ny voankazo fizarana ho an’ny vehivavy. Raha tadiavinao mitovy ny vehivavy izay sady noroahina sy fatra-paniry laza, ny iray hafa be ny toerana dia nandritra ny hetsika ho ny toerana tena tsy mitady tombom-barotra. Ireo hetsika ireo dia matetika tokoa ny filan’ny nofo sy ny fihetseham-po ny fanaovana azy ireo ny masaka fahafahana hiresaka momba ny olana mifandray amin’ny namana sahiran-tsaina olom-pirenena. Mandeha amin’ny famakiana tononkalo, ary fatorana ny mampanahy avo ny tahan’ny tsy manan-kialofana ao an-tanàna. Hanatrika ny famelabelaran-kevitra amin’ny filàna ho an’ny governemanta nanohana ny fiaraha-monina nizara ny fambolena sy hizara ny fitiavana ny idirana sakafo rehetra amin’ny mafana vehivavy. Na inona na inona asa manapa-kevitra ny hanatrika izany, ho azo antoka ianao mahalala tsara ny momba ny antony sy ny olana mifandray hanohy ny manao resaka. Ireo toe-javatra ireo mitovy ara-tsosialy sy ara-politika ny hetsika fa tsy misy ny tena nandidy ny rivotra, ary izy ireo dia mahafinaritra. Vehivavy loka hatsaram-panahy sy ny altruism amin’ny olona, ka an-tsitrapo no fomba lehibe mba hamorona ny voalohany mahasarika saika avy hatrany. Ankehitriny raha toa ianao ao an-tsena nandritra ny mafana sy ny oram-hook-up na ho haingana, tsy misy-kofehy-mifatotra fling, dia ny toerana tsara indrindra ho anao mba hihaona ny vehivavy dia ao amin’ny trano fisotroana na fikambanana. Araka ny Psikolojia Amin’izao fotoana izao, ny anton’izany dia noho ny vehivavy izay any amin’ny ireo toerana no mety tsy ho hook-dehibe na flings ihany koa. Ireo toerana ireo koa dia bebe kokoa ny mitondra ny karazana fifandraisana ilaina ny manao firaisana ara-nofo mahasarika: hahazo nahatsikaritra, tia ady fitia, ara-tsosialy ara-nofo nampihetsi-po, sahy haka ny ezaka, ary miresaka mivantana ny fikasany. Miezaha mba tsy hanao na inona na inona ireo zavatra amin’ny Sakafo Rehetra, ary ianao mety ho voarara avy amin’ny fivarotana. Noho ny tena namboarina»manapaka sy misafidy»mampiaraka traikefa mampiaraka an-tserasera dia manome, tena afaka hihaona vehivavy eto na inona na inona ny fiarahana tanjona. Raha ianao mitady fifandraisana maharitra, ny fiarahana amin’ny aterineto dia manome anao fahafahana mba mitovy ny tenanao amin’ny vehivavy izay fiainantsika, ny maha-izy azy, sy ny toetra hafa misy fiantraikany amin’ny manokana. Raha fotsiny ianao mitady tsotsotra fihaonana, ny aterineto no chock feno ny mampiaraka toerana izay afaka ny hifanaraka aminao ny amin’ny olona izay mitovy tanjona ara-nofo. Ny olona bebe kokoa ianao hihaona bebe kokoa ny vehivavy ianao mahazo mifandray, mba hifantoka amin’ny fanitarana ny ankapobeny faribolana ara-tsosialy. Arakaraka ny vehivavy tsy mahazo mifandray, ny midadasika kokoa ny tantaram-pitiavana tambajotra sy ny lehibe kokoa ny vintana ny fivoriana ny vehivavy iray te. Raha toa ka mitandrina ny mandeha any amin’ny iray ihany ny toerana mandritra izany fotoana hatrany hatrany, amin’ny farany ny fivoriana rehetra ihany ny olona. Izany no mahatonga ny fiarahana amin’ny fiainana dia miandrona. Jumpstart ny fiarahana amin’ny fiainana amin’ny alalan’ny frequenting toerana ivelan’ny ara-dalàna ny fahazarana sy ny fanovana ny fotoana mandeha any amin’ireo toerana ireo. Mandehana any amin’ny hafa ny kafe toerana, jereo ny fanaovana fanatanjahan-tena na ny mpianatra any ivelany amin’ny faritra misy anao, na any amin’ny Tantsaha ny Tsena amin’ny manaraka an-tanàna. Ny fanaovana izany dia manome anao fahafahana mba isan-karazany ny karazana sy ny isan’ny vehivavy mihaona aminao. Maro ny olona diso hahatanteraka ny faran’ny herinandro ny fiarahana, raha ny fandaniana ny weekday fotoana malalaka mijery TV. Etsy ankilany, ny vehivavy dia matetika no mandany fotoana izao fampiantranoana ara-tsosialy ny zava-nitranga, an-tsitrapo, izay manatrika ny asa, ary ny toy izany. Raha misafidy ny mandany ny herinandro nosarahina hiala avy mifanerasera, ianao dia tsy hita avy eo amin’ny fahafahana goavana mba hitsena ny vehivavy te.
Noho izany, misy manana izany
Ankehitriny ianao manana be dia be ny hevitra ho an’ny toerana mba hitsena ny vehivavy na fohy na maharitra ny fifandraisana. Ny zava-dehibe indrindra dia ny marina amin’ny tenanao ny momba ny fiarahana tanjona. Aorian’ny famaritana inona no karazana fifandraisana, tianao, ary ny karazana ny vehivavy iray te-hanana izany fifandraisana, any amin’ny toerana izay izy, dia tena mety ny mandehandeha. Avy teo, mampiasa izay isan’ny mahomby mahasarika ny teknika sy ianao ho tsara eo amin’ny fomba fahazoana ny vehivavy ny nofy
Ny fomba Hilaza Raha ny Arabo Bandy Tia Anao Tsiroaroa ny Fiainana →